नदी किनारामा फालिएको नवजात शिशुको उद्धार, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नदी किनारामा फालिएको नवजात शिशुको उद्धार
महोत्तरी । महोत्तरी प्रहरीले आज बिहान नदी किनारामा फालिएको एक नवजात शिशुको उद्धार गरेको छ ।
सोनमा गाउँपालिका–६ स्थित रुपनी नदीको किनारामा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको सो बालिकालाई स्थानीयवासीको सहयोगमा प्रहरीले उद्धार गरेको हो । मगरथानादेखि दक्षिणतर्फ गुलरिया टोल जाने बाटोमा एकाबिहानै स्थानीयवासीले शिशु देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
प्रहरीको सहयोगमा शिशुको उद्धार गरी जलेश्वर पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ ।रासस